ESI EHICHAPỤ IBE NA EXCEL - EXCEL - 2019
Hichapụ ibe na Microsoft Excel
Usoro nke ịdepụta ihe na òtù VK bụ otu akụkụ dị mkpa nke obodo ọ bụla dị elu, ya mere, ọ bụ site n'enyemaka nke foto ndị ebutere na ị nwere ike inye ndị na-agụ ya ozi ọ bụla na-adịchaghị mkpirikpi. Na mgbakwunye, mgbe ụfọdụ, nchịkwa nke ụfọdụ ndị ọha na eze chọrọ ịhazi ọ bụghị naanị foto, kamakwa ọdịnaya vidio, dịka isiokwu zuru oke.
Ịmepụta albums n'ime ìgwè VKontakte
Usoro nke ịdepụta ederede n'ime obodo na saịtị na ịkparịta ụka n'Ịntanet VK.com siri ike yiri usoro yiri ya na nchekwa ndị ọrụ na ibe nkeonwe. Otú ọ dị, n'agbanyeghị nke a, e nwere ọtụtụ akụkụ na onye ọ bụla nwe VC kwesịrị ịma.
Kedu ka esi tinye foto na ibe
Esi zoo vidio na ibe
Na-akwadebe iji mepụta albums
Ihe kacha mkpa ị ga-eme tupu ịmepụta ihe mbụ n'ime ndị otu ahụ bụ iji rụọ ọrụ kwekọrọ na mmemme maka ịgbakwunye foto ma ọ bụ ọdịnaya vidiyo. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịrụ ọrụ ndị a site na mmalite, n'ihi nke a ga-achọ ka ọ bụrụ na ị ga-enyocha okpukpu abụọ ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gosipụta ọrụ ahụ.
Ntuziaka a na-emetụtakwa ụdị obodo "Ọha Ọha" ma "Otu" VKontakte.
Na weebụsaịtị VK oghe ngalaba "Otu dị iche iche"gbanye na tab "Management" na site n'ebe ahụ gaa na isi akwụkwọ nke ọha mmadụ.
Pịa bọtịnụ ahụ na akara ngosi ahụ "… " ọzọ na mbinye aka "Ị nọ n'ìgwè" ma ọ bụ "A debanyere gị".
Mepee ngalaba "Nchịkwa Obodo" site na menu nke meghere.
Jiri igodo igodo iji gbanye gaa "Ntọala" ma họrọ site na ndepụta nke meghere "Ngalaba".
N'etiti ngalaba a na-eme n'ihu na-arụ ọrụ "Foto" ma "Ihe ndekọ vidiyo" dịka ọchịchọ nke gị onwe gị.
Mgbe ịmechara mgbanwe niile a chọrọ, pịa "Chekwa", iji tinye ntọala ndị ọhụrụ, mepee atụmatụ ndị ọzọ.
Biko rịba ama na n'ọnọdụ niile, a na-enye gị nhọrọ n'etiti ọkwa atọ dị na ịnweta ụfọdụ ike. Ọ dị oké mkpa ịghọta na ngalaba ọ bụla nwere ụdị "Meghee" niile ndi mmadu nwere ike idezi, ma "Mmachibidoro" naanị nlekọta na ndị ọrụ ikikere.
Ọ bụrụ na obodo gị bụ ihu ọha, mgbe ahụ, ntọala ahụ agaghị adị.
Mgbe ịmechara isi isiokwu ndị dị mkpa, ị nwere ike ịga n'ihu na usoro nke ịdepụta ihe.
Mepụta foto foto na otu
Ibuga foto gaa na otu a bụ ihe dị mkpa maka mmepụta nke otu ma ọ bụ karịa albums.
N'agbanyeghi eziokwu ahụ na ichikota achọrọ na foto anaghị egosipụta na ibe nke ọha na eze, a na-emepụta foto foto mbụ ozugbo mgbe ebubo avatars ma ọ bụ ìgwè dị na ya.
Gaa na ebe obibi obodo ma chọpụta ngọngọ ahụ n'aka nri "Tinye foto".
A pụghị ịchọta ihe ngọngọ ahụ kpọmkwem na etiti nke ibe dị na isi isiokwu ndị ọzọ.
Bulite foto ọ bụla na uche gị.
Ị nwere ike mechaa ma ọ bụ hichapụ ya dabere na mmasị gị.
Iji taabụ na elu nke ibe ahụ mepee, gaa "Foto niile".
Ọ bụrụ na ịnwee ihe oyiyi ebudatara na mbụ, kama Explorer, otu n'ime ọba ga-emeghe ka ịhọrọ foto, mgbe ị ga-achọ ka ị pịa njikọ ahụ "Foto niile" na elu nke ibe.
N'elu aka nri aka nri pịa bọtịnụ. "Mepụta Album".
Dejupụta mpaghara niile edere dịka ihe gbasara gị, dee ntọala nzuzo wee pịa "Mepụta Album".
Echefukwala ịgbakwunye foto na nchekwa ọhụrụ ahụ nke mere na ngọngọ na foto na-egosi na isi nke ọha na eze, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmepụta ọde ọhụrụ na gbakwunye ihe oyiyi.
Na nke a na foto n'ime otu VK nwere ike mechaa.
Mepụta vidiyo vidiyo na otu
Biko rịba ama na usoro maka ịmepụta nchekwa vidiyo na obodo VKontakte dị nnọọ ka ihe a kọwara na mbụ gbasara foto, naanị otu aha nke ngalaba dị iche.
N'okpuru isi nke otu dị n'akụkụ aka nri chọpụta ngọngọ ahụ "Tinye vidiyo" ma pịa ya.
Bulite vidio ahụ na saịtị ahụ n'ụzọ ọ bụla maka gị.
Gaa na ebe obibi obodo ma chọpụta ngọngọ n'akụkụ aka nri nke windo ahụ. "Ihe ndekọ vidiyo".
N'otu oge na ngalaba "Video", na n'elu aka nri, chọta bọtịnụ ahụ "Mepụta Album" ma pịa ya.
Tinye aha album ma pịa bọtịnụ. "Chekwa".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịkwagharị vidiyo agbakwunyere na album ahụ achọrọ.
Rịba ama na nkọwa na ntọala nzuzo ndị ọzọ ị nwere ike ịtọ iche maka nke ọ bụla ebudatara vidiyo, mana ọ bụghị maka album dịka dum. Na nke a, n'eziokwu, bụ otu n'ime ọdịiche dị iche iche nke arụmọrụ a site na nke ahụ n'ime profaịlụ onwe onye.
Ihe omume ndị ọzọ na-abịa site na mmasị onwe gị na ọdịnaya ahụ ma gbadaa nbudata vidiyo ọhụrụ, yana ịmepụta ndị ọzọ agbakwunyere. Ihe kacha mma!